Posted by သက်ဝေ at 2:11 PM
Hmoo April 1, 2009 at 2:37 PM
I love it(Today)
ZT April 1, 2009 at 3:07 PM
tg.nwai April 1, 2009 at 3:08 PM
ဟားဟား..သက်ဝေက တော်တော်နောက်တာပဲ..။ မှတ်ထားဦးမှ.. သတိတရနဲ့ကို။ တို့ကတော့ မင်မသေတော့ သူများတွေကို မနောက်နိုင်ဘူး..။
sin dan lar April 1, 2009 at 3:29 PM
မသက်ဝေ တော်တော်ကျပ်တာပဲ... ကြောက်တောင်ကြောက်သွားပြီ...။
Welcome April 1, 2009 at 3:33 PM
ဒီနေ့မှာ .. (မတော်ရသေးတဲ့) ချစ်သူက ဘာနေ့လဲလို့ မေးလာလို့ မသိဘူးလို့ ဖြေခဲ့ရင် အကောင်းသား။ သိတယ်လေ (ဘာနေ့)လို့ ဆရာကြီး လုပ်လိုက်မိတာ ခုထိ ချော့လို့ မပြေသေး ပါဘူး .. .. ကယ်တော်မူပါ...။
Ko Boyz April 1, 2009 at 4:26 PM
ဇနိ April 1, 2009 at 5:17 PM
ဒီဆိုးတာတွေတောင် နောက်ဆိုးဆိုးပြီး မဟုတ်ဘဲရေးထားသလားတောင် ထင်နေမိတယ်
(စိတ်က ဘာမှ မရဘူး အကုန်နောက်တယ်ထင်တာ)
strike April 1, 2009 at 5:45 PM
ဟိ ဟိ....ကျွန်တော်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖုန်းနဲ့လုပ်တာအငိုက်မိသွားတယ်
Phyo Evergreen April 1, 2009 at 8:47 PM
အတော်ချိုး... ရီရတယ်.. ငယ်ငယ်တုန်းကဟင်းရည်ပေးမယ်ဆိုပြီး ချိုင့်ထဲရေနွေးတွေထည့်ပေးဖူးတယ်. အဟက်..။ အားလုံးသတိ........။
သင်းနွယ်ဇင် April 1, 2009 at 9:35 PM
PAUK April 1, 2009 at 10:36 PM
Anonymous April 1, 2009 at 11:46 PM
Today, I am thinking of you...
khin oo may April 2, 2009 at 1:14 AM
တန်ခူး April 2, 2009 at 12:37 PM
Naughty Thet Wai
ကလူသစ် April 3, 2009 at 10:55 PM
Nu Thwe April 4, 2009 at 5:29 AM
ကျီစားသန်ပေမယ့် ရန်မများလို့ တော်သေးတာပေါ့။
F13 မနှိပ်ခင် ဒီစာကို ရေးသွားတယ်း)း)း)
Moe Cho Thinn April 5, 2009 at 4:08 AM
ဒီနှစ်ရော ဘယ်သူတွေ မမလက်ချက်နဲ့ ခံလိုက်ရသေးလဲ။ ချိုသင်းလဲ တူတူပဲ။ ည၁၂နာရီ ထိုးခါနီးထိ နောက် ကောင်းတုန်း။ အိမ်မှာလဲ ညမိုးချုပ်ထိ လူတွေစုံလို့။ ချိုသင်းချော်လဲလို့ ခြေကျိုးသွားတယ် ဆိုပြီး ဖုန်းဆက်လိုက်လို့ ဟိုးအဝေးကနေ ပြေးလာ သတင်းလာမေးကြရှာတာ။ :D
khin oo may April 5, 2009 at 5:50 PM
T T Sweet April 6, 2009 at 11:12 PM
တော်တော်ဆိုးတဲ့ သက်ဝေပဲ။ တန်ခူးနဲ့သူငယ်ချင်းဆိုတော့ တို့နဲ့ ၇ွယ်တူများလား။ ၁၆နှစ် တစ်ရက်လျော့တွေလေ။
ဒီနှစ် ဘယ်သူ့မှ မfool လိုက်ရဘူး။ ရုံးမှာ အလုပ်ရှုတ်နေလို့။ မနှစ်ကတော့ ကိုယ့်အိမ်ကလူကြီးကို fool လိုက်တယ်။ ကိုယ် retrench မိတယ်ဆိုတော့ သူကတကယ်ထင်နေတာ။
နောက်မှ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ သူအရမ်းပျော်သွားတယ်။
nu-san April 16, 2009 at 8:04 PM
မမက အတော် အနောက်သန်တာပဲ.. :D
အမရေ.. ကျွန်တော်ကတော့ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မနောက်ဖူးဘူး.. ကိုယ်ကတော့ အနောက်ခံရဖူးတယ်... :D ဒီနှစ်တော့ အရှုတ်တွေလုပ်ရပြီး အရူးမီးဝိုင်းသလိုပဲ.. April Fool ထက် ဆိုးတယ်.. :)
Soke Phwar June 11, 2009 at 5:33 AM
မေဇင် April 1, 2010 at 12:12 PM
call me , Urgent !
ဆိုတဲ့ SMS ကို လူ 8 ယောက်ဆီ တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ပို့တာမှာ.....5ယောက်လောက်က ချက်ချင်း ဖုန်းတွေ ၀ိုင်းခေါ်ကြတယ်... 1 ယောက်ကတော့.. why ? တဲ့...2ယောက်တော့ သိတယ်ကွယ်...း)
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ5ယောက်ကို ကျေးဇူးတကယ်တင်မိပါတယ်။း)